सराेज तामाङ शनिबार, चैत ८, २०७६, १२:००
काठमाडौं- चीनको बुहानबाट फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) ले विश्व खेलकुद ठप्प पारेको छ। यतिबेला हरेकको कुराकानीको विषय कोरोना बनिरहेको छ, त्यसबाट खेलाडी पनि टाढा हुन सकेका छैनन्।
कोरोनाले ११ हजारभन्दा बढी मानिसको ज्यान लिइसकेको छ। दिनदिनै विकराल रुप लिएको कोरोनाको जोखिममा नेपाल पनि छ। त्यसले सबै क्षेत्रमा जस्तै खेलकुदमा पनि प्रभाव ठूलो पारिरहेको छ।
यो समय खेलकुद गतिविधि धेरै हुने समय हो। सहिद स्मारक ए डिभिजन लिग सकिएपछि मोफसलका प्रतियोगिताहरु धमाधम हुन थालेको थियो। तर अहिले कोरोनाको कारण रोकिएको छ। बी डिभिजन लिग पनि सरेको छ। फुटबलका हरेक तहमा हुने प्रतियोगिता तथा प्रशासनिक काम ठप्प छ।
क्रिकेटको पनि हालत उस्तै छ। यतिबेला त्रिवि क्रिकेट मैदानमा फ्रेन्चाइज टी २० क्रिकेट लिग एभरेष्ट प्रिमियर लिग भइरहनु पर्ने समय हो। तर कोरोनाको कारण हुन सकेन। विश्वचर्चित क्रिकेटर क्रिस गेलदेखि अरु कीर्तिमानी खेलाडी आउन पाएनन्। इपिएल लगत्तै नेपाली क्रिकेट टिम नामिवियामा हुने आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग टु को तयारीमा क्लोज क्याम्पमा रहने थियो। तर सबै योजना र कार्यतालिका कोरोनाले चौपट पारेको छ।
यतिबेला सबै खेल गतिविधि स्थगित भएको छ। योसँगै खेलाडीहरुमा पनि डर छ। विश्वमा महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोनाले कतै नेपालमा पनि ठूलो क्षति गर्ने त होइन?
सधैँ ब्यस्त रहने खेलाडीहरु कोरोनाको कारण प्रतियोगिता तथा अभ्यास स्थगित भएपछि के गरिरहेका छन्? खेलाडीको दिन कसरी बितिरहेको छ? विश्वमा कोरोनाको सन्त्रास झनै फैलिँदै जाँदा खेलाडीहरु के भन्छन्? र कोरोना संक्रमित व्यक्तिहरुलाई नेपाली खेलाडीको सन्देश के छ? उनीहरुकै शब्दमा :
अरुणा शाही (कप्तान, महिला भलिबल)
अलिक विरामी-विरामी नै छु। रुघाखोकी लागेको छ। तर यो कोरोना लागेको चाहिँ नभन्नु होला। मलाई चिसोको कारण यस्तो भएको हो। अलि अलि घाइते पनि थिएँ।
अभ्यासहरु गर्ने, खेलहरु खेल्ने नै तालिका थियो। तर कोरोनाले चौपट बनाएको छ। घरैमा बस्ने, खाने त हो।
कोरोनाको संक्रमणले निकै ठूलो क्षति गरेको छ। बाहिर त धेरै मान्छेहरुको निधन भएको छ। हामी चाहिँ कसरी कोरोनाबाट बच्ने भन्नेतर्फ लाग्नु पर्छ।
ज्ञानेन्द्र मल्ल (कप्तान, पुरुष क्रिकेट टिम)
अहिले क्रिकेट गतिविधि छैन। क्रिकेट गतिविधि नभएपछि घरैमा बसिरहेको छु। घरको काममै ब्यस्त छु। लामो समयपछि परिवारलाई पनि राम्रो समय दिन पाइरहेको छु। कोरोना भाइरस नभइदिएको भए यतिबेला हामी एभरेष्ट प्रिमियर लिग (इपिएल) क्रिकेट खेलिरहेका हुन्थ्यौं। इपिएल सकेलगतै क्लोज क्याम्प थियो। क्लोज क्याम्पपछि हामी आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग टु को लागि नामिविया जाने तालिका थियो। तर सबै सरेको छ।
मलाई चाहिँ कोरोनाको डर भन्दा पनि यो पूर्वतयारी हो। र कोरोना लागिहाल्यो भने पनि आत्तिहाल्नु पर्ने कारण छैन। सरकार, मिडिया र अरु माध्यमबाट पनि हामीले जानकारी पाइरहेका छौं कसरी बच्ने भनेर।
कोरोना भाइरस छिटो सर्न सक्छ। मान्छेबाट मान्छेमा सर्ने यो। त्यसैले हामी सबैले सतकर्ता अपनाउनु पर्छ। हामी साथीभाइहरुसँग भेटघाट गर्दा हात मिलाउने, अंगालो हाल्ने काम नगरौं। स्यानिटाइजरले हात सफा गर्ने गरौं।।
नेपालमा फैलिएको छैन। केही हुँदैन भन्नु भन्दा पनि हामी पहिले नै सतकर्ता अपनाउनु पर्छ। सकभर बाहिर नजाऔं। यदि कोरोना लागि हाले पनि आत्तिनु हुँदैन। निको हुन सक्छ।
नविता श्रेष्ठ (टेबलटेनिस खेलाडी)
मेरो दैनिकी नै परिवर्तन भएको छ। पहिले बिहान अभ्यासको लागि हुन्थ्यो। दिउँसो अरु काम नै हुन्थ्यो तर कोरोनाको कारण अभ्यास पनि भएको छैन अन्य काम पनि। अहिले त बिहान उठ्यो। खायो फेरि सुत्यो।
पहिले अभ्यास भइरहँदा जाँगरिलो भइन्थ्यो। अरु काम पनि राम्रोसँग हुन्थ्यो। अहिले अल्छि भएको छु। घरभित्र नै हुन्छु। टिभी हेर्ने, सामाजिक सञ्जाल चलाउने, यही त हो।
यो अवधिमा प्रतियोगिता त थिएन तर हाम्रो योजनाबद्ध अभ्यास भइरहेको थियो। जेठमा प्रतियोगिता आउँदै छ। त्यसैको लागि हामी योजना बनाएर अभ्यास गर्ने गरेका थियौं।
कोरोना लाग्यो भने त तनाब भइहाल्छ नि। त्यही भएर सकेसम्म पहिले नै सतकर्ता अपनाउनु पर्छ। बाहिर पनि धेरै हिँडडुल गरेकी छैन।
नेपाल जस्तो सानो देशमा कोरोना लाग्यो भने त फैलिहाल्छ देशभर। त्यसैले सबै जना बेलैमा होसियार हुनु नै सबैभन्दा उत्तम उपाय हो।
सबैलाई आफ्नो ख्याल गर्नु होला भन्न चाहन्छु। लागिहालेमा पनि छिट्टै उपचार होस्। कोरोनाको लक्षण देखिए वरिपरिको सबैलाई जानकारी दिन पनि म अनुरोध गर्छु। किन भने त्यहाँको मान्छेले चाँडै थाहा पाएपछि सुरक्षित हुन खोज्छन्।
नवयुग श्रेष्ठ (फुटबल खेलाडी)
म अहिले झापामा छु। बिहीबार बेलुका झापा आइपुगेँ। हुलमुलमा बस्नु हुँदैन। आर्मी क्लबबाट बिदा लिएर घर आएको हो। घर पनि म पुगेको छुइन। आज (शनिबार) घर (इलाम) पुग्छु।
अहिले त माहोल नै डरसरी भएको छ। सबै जना डराइरहेका छन्। काठमाडौंदेखि बाहिर जानेको जमात पनि बाक्लो छ।
हाम्रो राष्ट्रिय टिमको फेसबुक ग्रुप छ। केही भए त्यहाँ म्यासेज आउँछ। अब के गर्ने भन्ने कुराहरु भइरहेको हुन्छ। साथीहरुसँग पनि कुरा भइरहेको हुन्छ। अबको मेरो योजना भनेको घरमा बसेर आफै अभ्यास गर्ने हो। यो बाहेक अरु केही गर्न सक्ने अवस्था नै छैन। मैले कोरोना भाइरसबाट बच्न सतकर्ता त अपनाएको नै छु। घरमा पुगेपछि चाहिँ परिवारसँग बस्ने यति नै हो।
हामी अभ्यास गरिरहने मान्छे। केही नहुँदा, त्यतिकै बस्दा अलिक अल्छे भइँदो रहेछ।
कोरोनाको कारण धेरै देशमा धेरै मान्छेको निधन भइरहेको छ। यो निकै दुःखदायी कुरा हो। अब नेपालमा पनि विस्तारै विस्तारै कोरोनाको संक्रमण बढ्छ भन्ने हल्ला फैलिएका छन्। त्यसैले हामीले सतकर्ता अपनाउनु पर्छ। कोरोना के कारणले सर्छ र कस्तो लक्षण हुन्छ भनेर थाहा पाउनु पर्छ।
अनु अधिकारी (कराते खेलाडी)
एक हप्ताको लागि अभ्यास स्थगित भएको छ। हाम्रो बिहान बेलुका अभ्यास भइरहेको थियो। यो अभ्यास टोकियो ओलम्पिकको लागि हो। तर कोरोना भाइरसको कारण केही दिनको लागि अभ्यास रोक्नु परेको हो।
अहिले त घरैमा बसेर दिन बितिरहेको छ। घरमा हुँदा समाचारहरु हेर्छु। निकै डर लाग्छ। कोरोनाले विश्वमै ठूलो क्षति गरेको छ। धेरैको निधन भएको छ।
एकदमै स्वथ्य भएका मान्छे पनि कोरोनाका कारण मरिरहेका छन् भनेर आइरहेको छ। यसले झनै त्रास फैलिएको छ। विकसित राष्ट्रमा त त्यस्तो हालत छ भने, नेपालमा ह्वातै आइहाले के गर्ने? अवस्था भयानक हुन सक्छ। त्यही भएर पनि मलाई एकदमै डर लागि रहेको छ।
बाहिर निस्किदा पनि डर लाग्छ। अब कोरोनाबाट बच्नको लागि चाहिँ हामी सरकारको मुख ताक्नु भन्दा पनि सबै सजक हुनु पर्छ। आफू सुरक्षित हुनुपर्छ। आफ्नो परिवारलाई बचाऔं। सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्छ। स्वास्थ्यको धेरै ख्याल गरौं। स्वास्थ्य छ त सबै छ।
पुनम श्रेष्ठ (जुडो खेलाडी)
आजदेखि सातादिनको लागि अभ्यास रोकिएको छ। अब आइतबारदेखि आफै सेल्फ ट्रेनिङ गर्छु। मंगोलियामा एसियन जुडो च्याम्पियनसिप हुन लागेको थियो। त्यसको लागि अभ्यास गरिहेका थियौं। तर अब प्रतियोगिता पनि सरेको छ।
कोरोना नेपालमा आयो भने त निकै गाह्रो छ। किनकी राम्रो अस्पतालको ब्यवस्था छैन। सामग्रीको अभाव छ। त्यसैले बेलैमा सबैले सावधानी अपनाउनु पर्छ। हातमा पञ्जा, मुखमा मास्क लगाएर हिँड्ने गरेकी छु।
विदेशतिर खेलाडीमा पनि कोरोना देखिएको छ। अवस्था गम्भिर पनि छ। नेपालमा कोरोनाको संक्रमणले विकाराल रुप लियो भने के होला? डर पनि छ। धेरै भिडहरुमा नजाने, घरमै बस्ने गरिरहेको छु।